Nhau - Iko Kushanda KwePeristaltic Pump muWaste Water Treatment
Mumakore achangopfuura, nekuenderera mberi kwekuenderera mberi kwemaindasitiri uye kukura kwemaguta, hupfumi hwemagariro hwakawedzera nekukurumidza, asi dambudziko rekusvibisa rakazotevera rave nyaya yakakosha inoda kugadziriswa nekukurumidza. Tsvina kurapwa kwave zvishoma nezvishoma kwakakosha mukusimudzira hupfumi uye kuchengetedza zviwanikwa zvemvura. chinhu. Naizvozvo, zvine simba kuvandudza marapirwo etsvina uye hunyanzvi hweindasitiri inzira yakakosha yekudzivirira kusvibiswa kwemvura uye kupedza kushomeka kwemvura. Kuchenesa tsvina ndiyo nzira yekuchenesa tsvina kuti isangane nehunhu hwemvura zvinodiwa pakuburitsa mune imwe muviri wemvura kana kushandisa zvekare. Tekinoroji yemazuva ano yekurasa tsvina yakakamurwa kuita ekutanga, sekondari uye tertiary kurapwa zvichienderana nedanho rekurapa. Iyo yekurapa kwekutanga inonyanya kubvisa iyo yakamiswa yakasimba nyaya mune tsvina. Maitiro epanyama anowanzo shandiswa. Iyo yechipiri kurapwa inonyanya kubvisa iyo colloidal uye yakanyungudutswa organic chinhu mune tsvina. Kazhinji, tsvina inosvika pakurapwa kwechipiri inogona kusangana neyakajairwa, uye iyo sludge nzira uye nzira yekurapa yebiofilm inowanzo shandiswa. Kurapa kwepamusoro ndiko kuenderera mberi nekubvisa zvimwe zvakasvibisa, senge phosphorus, nitrogen, uye zvakasviba zvinosvibisa izvo zvinonetsa kugadzira biodegrade, inorganic pollutants, uye utachiona.
Sarudzo chaiyo uye yakavimbika
Pombi dzePeristaltic dzinoshandiswa zvakanyanya mukushambidzwa kwenzira dzekurasa tsvina nekuda kwehunhu hwavo. Yakachengeteka, yakarurama uye inoshanda chemakemikari chipimo uye kuendesa ndizvo zvinangwa zveyese tsvina kurapwa mashandiro, ayo anoda mapombi akagadzirirwa kubata anonyanya kudzvinyirira mafomu.
Iyo pombi yeparistaltic ine kugona kwakasimba kwekuzvidzora uye inogona kushandiswa kukwidza mwero wemvura yetiweji yekurapwa. Iyo pombi ye peristaltic ine yakaderera shear simba uye haizoparadze kushanda kweiyo flocculant painotakura shear-sensitive flocculants. Kana iyo pompiyumu pombi ichisimudzira mvura, mvura yacho inoyerera chete muhosi. Kana uchisimudza tsvina ine matope nejecha, iyo pumped mvura haizobate pombi, chete pombi chubhu ndiyo inobata, saka hapazove nejamming phenomenon, zvinoreva kuti Iyo pombi inogona kushandiswa inoenderera kwenguva refu, uye imwechete pombi inogona kushandiswa kwakasiyana kwemvura kutapurirana nekungotsiva pombi chubhu.
Iyo pompiyumu pombi ine yakakwira fluid kutapudza kururamisa, iyo inogona kuve nechokwadi chekuita kwemvura vhoriyamu yeakawedzera reagent, kuitira kuti mhando yemvura irapwe zvinobudirira pasina kuwedzera yakawandisa makemikari anokuvadza. Uye zvakare, mapampu eperistaltic anoshandiswa zvakare kuendesa masampuli akaedzwa uye maoreniki eantiki pane akasiyana ekuona mhando yemvura uye zviridzwa zvekuongorora.
Sezvo mataundi uye maindasitiri kurapwa kwemvura kunowedzera kuve kwakajeka uye kwakaomarara, kunyatso dosing, kuendesa kwemakemikari uye kushambadzira kwechigadzirwa kwakakosha.
Imwe kambani yekurapa mvura yakashandisa Beijing Huiyu fluid peristaltic pombi YT600J + YZ35 mune biofilm tsvina kurapwa bvunzo maitiro ekuchinjisa tsvina ine jecha nejecha kune biofilm reaction tank kubatsira kuona kushanda kweiyo biofilm sewage kurapwa maitiro. kugona. Kuti ubudirire kupedzisa bvunzo, mutengi anoisa pamberi zvinotevera zvinodiwa zvepombi peristaltic:
1. Iyo pombi ye peristaltic inogona kushandiswa kupomba tsvina netsvina yemukati me150mg / L isina kukanganisa hupenyu hwebasa repombi.
2. Wide renji yetsvina kuyerera: mashoma 80L / hr, yakakwira 500L / hr, kuyerera kunogona kugadziridzwa zvinoenderana neicho chaicho maitiro anodikanwa.
3. Iyo pompiyumu pombi inogona kuvhiyiwa kunze, maawa makumi maviri nemana pazuva, kuenderera kushanda kwemwedzi mitanhatu.